10 Awesome Vacation Rental Nzvimbo MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Awesome Vacation Rental Nzvimbo MuEurope
Kuvanzika, 5-nyeredzi zvivakwa zvehotera, mukare maonero, uye nzvimbo, inotevera 10 mavara awana zvese. izvi 10 zvinotyisa nzvimbo dzekurendesa zororo muEurope dzakakomberedzwa nehunhu hunoshamisa uye dzinouya nezvinoshamisa zvinoshamisira.
1. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo MuFrance: Provence
Matombo edzimba, dzimba dzekare dzeFrance, iyo yakanaka Dentelles de Montmirail makomo, Provence mumwe 10 inonyanya kutyisa nzvimbo dzekurendesa zororo muEurope.
Chekutanga, kumuka kune lavender hwema uye kunhonga cherry kubva mumiti ndeimwe yezvakanakisa zvinhu zvekuita muProvence. chepiri, kuyemura yakanaka Mont Ventoux kubva kumahwindo eimba yako yenyika kuchapfuura chero kurota kwawakambove uine zororo rakanakisa.
MuProvence, une zvakawanda zvekugara zororo zvekugara: Dzimba dzekurima, dzimba, uye dzimba dzinoyevedza. Dzese renti dzekuzorora dzakashongedzerwa zvakakwana kuti dzigadzirire mhuri dzine vana, kana mapoka eshamwari.
From $136 nokuti 2 imba yekurara ku $350 yeimba, por usiku.
2. Yakanakisa Zororo Rendi Nzvimbo MuEurope MuItari: Tuscany
Mupata wewaini weTuscan inzvimbo yakanaka yekurendesa zororo muItari. Zvikomo zvisina kusarudzika inzvimbo yakanaka yezororo. Semuyenzaniso, chitsuwa chinofema cheGiglio, kana imba yemamongi yeFranciscan muLa Verna, zviitiko zvakakura zvakasarudzika munzvimbo yakanaka yeTuscan.
Mukuwedzera, kumuka mangwanani, kubuda kunze kwepurazi imba kuenda kune akanaka maonero eTuscany – inokosha. pano, iwe unogona kusarudza kubva kuchando nedziva repachivande negirazi rewaini, kana kuenda kushanyi yewaini.
Villas, Apartments, uye dzimba dzekugara.
$68 kuti $200 por usiku.
Mabasa evana: Zvirokwazvo! Ipo vakuru vachizvipuruzira, vana vane kuputika munzvimbo dzekudyara dzePistoia kana Cavallino Matto paki yekuvaraidza in Livorno.
3. Yakanakisa Zororo Rendi Nzvimbo MuUK: West England
Anoshamisa mahombekombe, dzimba dzematombo, kuvira kwezuva kwakanaka, uye runyararo, ita South West England nzvimbo yakakodzera yekurendesa zororo mumaruwa eChirungu. Pamusoro pe, ari maguta anoyevedza emumahombekombe yeDevon naDorset vakachengetedza runako rwavo mumakore apfuura uye vakamira vakashinga mumaoko enguva nemhepo ine munyu.
Kufamba uchitevedza mahombekombe egoridhe, kuyemura Simon Old Harry matombo, kana iyo Jurassic Coast, kurova kuputsika kweguta chero nguva. Ndichiri kugara pano, iwe uchanzwa urikufamba uchidzoka munguva kubva kunguva yepamberi kusvika ku 17fung zana remakore. Iyo nharaunda ine kukuudza iwe nyaya yenguva uye maitiro echisikigo muchikamu chino cheEngland, nepo huswa kana echinyakare matombo dzimba dzichakuudza nezve hupenyu netsika muWest England.
saka, kana iwe uchida nezvechirungu tsika, minda, akitekicha, uye ngano – ipapo uchaona kuti West England ine dzimwe nzvimbo dzinotyisa dzekurenda zororo muEurope.
$70- 320 por usiku
4. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo MuSwitzerland: The Swiss Alps
With pamusoro 10,000 pokugara mikana, ari Swiss Alps inzvimbo inoshamisa yekurendesa zororo muEurope. Iyo Swiss Alps inoshamisa makomo renji, inopa akanakisa maonero, nzvimbo, trails, girl, akasiyana-siyana zororo rendi zvivakwa, izvo zvichaita kuti shaya yako idonhe.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezvekurendesa zororo muSwiss Alps ndechekuti kune imba yechero kuravira neboka. Zvemhuri, mapoka eshamwari, ine kunze inopisa hothu, chalet, kuona gomo kana mupata - Iwo maSwiss Alps akasiyanasiyana zvekuti ndiyo inzvimbo yakanaka yekurendesa zororo kune chero munhu.
saka, ikozvino iwe unongofanirwa kusarudza pakati nzvimbo dzisiri-dzakarohwa-nzira saLucerne, kana mupata wemapopoma, nyanza Maggiore kana maonero emakomo parwendo rwako kuenda kuzororo risingakanganwike zvachose.
Chalets, makabati emapuranga, dzimba, kana dzimba.
From $92 yeimba kune $265 husiku humwe chaihwo chechalet kana imba ine dziva maonero.
5. Awesome Vacation Rental Nzvimbo MuFrance
France inoshamisa nzvimbo yekurenda zororo muEurope. Nenzvimbo dzakawanda dzakanaka uye dzakasiyana-siyana, takaona zvakaoma chaizvo kutora imwe chete inoshamisa nzvimbo yekurendesa zororo kune yako inotevera French zororo.
Semuyenzaniso, Biarritz ine mahombekombe anoshamisa kwazvo, nepo Dordogne mupata unopa zvinoshamisa gomo uye rwizi maonero.
Chero nzvimbo yezororo yekuzorora yaunosarudza, yako inoshamisa zororo rendi ichave yakashongedzerwa zvakakwana, neminda yakanaka, uye mumatunhu akanaka kwazvo eFrance.
MuBrittany, iwe uchawana dzimba dzekubhadhara zororo, kana kottage ine nzira yakavanzika kumahombekombe akanaka.
$75 – $145 por usiku
6. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo MuCzech Republic: Bohemia
Bohemian Switzerland ndiyo imwe yenzvimbo dzinoyevedza muEurope. Kutenda kune anoshamisa sandstone makomo uye maonero eErbe rwizi, Czech Switzerland iparadhiso yezororo. saka, inzvimbo inotyisa yezororo yekurenda muEurope.
Ino nzvimbo inopa epic maonero, nzira dzakawanda dzekukwira makomo, mhuri pikiniki mavara, uye rwizi kushambira mukati.
Dzimba dzemazuva ano padyo padyo nemusango, uye hupenyu hwe 100 mamirioni emakore. Iro guta reDecin inzvimbo yakanaka yekurendesa imba yako kure nemusha.
$90 – $150 por usiku
7. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo MuAustria: Styria
Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAustria, iyo Styrian Alpine nzvimbo ndeimwe yeakanyanya kunaka muAustria. saka, Styria inzvimbo inotyisa yezororo muEurope: maonero, girazi, mafuro manyoro, uye hunaku hunhu.
Mukuwedzera kune inoyevedza maonero uye yekukwira nzira, muSytria, iwe unozonyatso zorora mushure mekushanyira iyo matsime anodziya chaiwo. Nerumwe, nekuda kwemiti mizhinji yemapuro neminda yemizambiringa, unogona kuisa musoro wako, kana kunakidzwa nepikiniki inonaka.
makabati emapuranga, dzimba dzine madziva, chalet.
$65 – $200 por usiku
8. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo: London
London ndeimwe yenzvimbo dzinotyisa dzekurendesa zororo muEurope nekuti iguta rine sarudzo dzisingaperi. Pano iwe unowana yakasarudzika uye yakanaka nharaunda, nemapurani akasiyana, tsika nemagariro, uye inodedera. Notting Chikomo kurota, Hampstead Heath ndeyechinyakare uye inotumbuka, uye Kensington iri posh uye inoyevedza. Iyi ingori mienzaniso mishoma yenzvimbo dzinotyisa dzekubhuka yako inotevera renti yezororo kure nemusha.
Uyezve, London inopa zvinoonekwa zvakawanda, misika, mamiziyamu, nemapaki ezve chero kuravira uye zororo mhando. saka, ILondon ichave kuhwina kwakakwana kweiyo mhuri yezororo muEurope nevana: mapaki evaraidzo, zvitoro zvakanakisa zvepastry, uye Harry Potter ehe saizvozvo.
Imba yekurenda iri pakati peLondon, uye dzimba dziri kunze kweLondon, depending on the zone.
9. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo MuGerman: Bavaria
Bavaria ndiyo imwe yenzvimbo dzinoyevedza kuGerman, kunyanya muchirimo. Kubva kuAlps kuenda kuDanube rwizi, mumhanzi, uye zvinonaka zveBavaria, ndine zvinhu zvakawanda zvekuita, munhu 10-rwendo rwezuva muBavaria zvinogona kunge zvisina kukwana kunakidzwa nezvose zvinoratidzwa nenzvimbo inoyevedza.
saka, iwe unofanirwa kuronga zvakanaka kumberi kwezororo rako muBavaria. Sezvo Bavaria iri imwe yenzvimbo dzinodiwa dzezororo kuGerman, kune veko uye vashanyi, zororo rendi dzinowanzo kuverengerwa mwedzi mishoma pamberi. Kunze kwekugara kwekubhuka, kuti uite zvakanakisa zororo rako reBavaria, tsvaga uye gadzira runyorwa rwezvinhu zvepamusoro uye zviitiko zvaunofanira kuita, uye uve nerwendo rwakawanda.
Villas, Apartments, nedzimba.
$80- $350 por usiku
10. Inotyisa Yekuzorora Rental Nzvimbo MuItaly: Lake Como
Lake Como ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzezororo muItari. Kunyangwe paine chokwadi icho chinogona kuve chakazara chakazara mukati memwaka wezhizha, nyanza inoyevedza uye kuona kwemakomo, nemhepo yakanyarara, isa Lake Como mu 10 inonyanya kutyisa nzvimbo dzekurendesa zororo muEurope.
Nguva yakanakisa yeku zororo muLake Como uri pakati paKurume naNovember, kana Chikunguru-Nyamavhuvhu ndiyo mwedzi unodziya uye wakabatikana. saka, zvakakosha kuti iwe uite tsvagiridzo yako pamberi. saka, chinhu chakakosha ndechekutarisa pekugara uye zvayakanakira nezvayakaipira kubhadharira renti yezororo mugungwa, kune chero chikamu chegore.
Villas dzepamusoro, Apartments, chalet, uye dzimba dzekugara.
$40 pazuva kusvika $500 pavhiki
pano pa Save A Train, tichafara kubatsira kuronga rwendo kuenda ku 10 inonyanya kutyisa nzvimbo dzekurendesa zororo muEurope. Rwendo rwechitima kuenda kunzvimbo yekuenda uye imba inorota kure nemusha ndiyo inokurumidza uye inodhura nzira yekufamba.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "1o Inotyisa Yekuzorora Nzvimbo Rental muEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)